Iimpepha zamafu | Red Hat JBoss EAP ngumgcini wokugqibela we-Best Cloud Middleware
Igama leMigangatho yamafu i-Red Hat JBoss EAP ngumgcini wokugqibela we-Best Cloud Middleware ye-2016-2017
Ndiyaxhalabela ukwabelana ngeendaba Isicelo se-Red Hat JBoss Enterprise I-Platform isigxina kwi-2017 Cloud Awards, ukulwa nesihloko esithi "I-Platform e-Best-as-a-Service / Cloud Middleware." Sithathwa ukuba senze le ndlela kumgaqo wokumisela kwaye silindele ukuvakaliswa kwesiza kwixesha elide kakhulu.
Ukukhumbula malunga nento esiyizalisekisileyo kunyaka odlulileyo, ndiyamangaliswa kwindlela esikude ngayo. Emva kweenyanga ezintandathu kuphela, siqhubela phambili esinye sesicwangciso sethu esikhulu nesininzi esiphezulu siqhutywe ngokufika kweJBoss EAP 7 njengokwakhiwa kwezicelo zefu. Namhlanje, i-JBoss EAP ngumthombo ovulelekileyo wesiseko se-Java EE 7-server efanayo. Siphakamisa ipulatifti yeemeko zefu - ngakumbi i-Red Hat OpenShift Container Platform, eyona i-winner ye-2013 Cloud Awards - ukunika abaqulunqi beprogram yeJava irejista yokungena kwi-rejista-yendawo yokubhalisa, i-microservice architectures, amacandelo, kwaye yinto nje i-iceberg, ngelixa bexhobisa ukuba baqhubeke besetyenziselwa nokwandisa i-framework yesicelo sabo sokwenza isicelo.
Njengoko iTechValidate ibonakala kwi-Red Hat kwi-2016, ubunzima obuphezulu obujongene neenkalo ezininzi ze-IT namhlanje zibandakanya iindleko kwaye zitshintshela ukugcina isiseko sesicelo, kunye nesisindo sokuphucula ukukhawuleza ukuthengiswa kwemali kunye nokuyila. Ukujongana nale ngxaki, imibutho iququzelela amandla abo ukuba idlulise ukuhlonipha ishishini kunye nokuqhubela phambili ukuvakalisa ngokukhawuleza kunokuba bachasene nokuphucula ukuphucula nokufaka izicelo kwifayile-kwaye abaninzi banamathela kwi-JBoss EAP ukuze bahlale le mizamo.
I-IDC iqine i-IDC iqhagamshelana nabakwa-Red Hat abathengi basebenzisa i-JBoss EAP ukuze bazinze kwaye baphucule ukuzama ukuphucula izicelo zabo. Abaxhasi babancoma i-JBoss EAP ngokubonelela nge-savvy amalungiselelo eemali ezixhobisa ukubeka izikhundla zabo kwizikhundla kunye nokuthumela imali kunye neengxowa-mali-mali malunga nelifa, amalungiselelo akhethekileyo. I-IDN ye-2015 icinga, iqokelelwe yi-Red Hat, yafumanisa ukuba le mihlangano yafezekisa i-509 yepesenti inzuzo engenakunceda ngaphezu kweminyaka emithathu, ngelixa idala i-70 ipesenti yezicelo ezininzi zonyaka kunye ne-35.5 yeepesenti ezingaphantsi kweeyure zoyilo nganye kwisicelo ngokuxhomekeka kwi-JBoss EAP.
Amanani ayingqayizivele, kwaye idibanisa imiphumo emihle eyenziwa yiJBoss EAP kwimibutho yabathengi. Iza malunga nale ndlela, kwaye indlela i-100 ekhulwini lwabaphenduli kwi-TechValidate yophando ithi bayonwabile nge-JBoss EAP, uncedo lokufakazela ukuhamba phambili esiyenzile-kunye nomsebenzi esenzayo ukugcina oko kuhamba phambili kunye ne-JBoss EAP. Ndiyathokoza ngomsebenzi okhutheleyo esiwubekele ukufikelela kweli nqanaba, kwaye kwakhona, sithathwa ukuba siyabonwa.
Ezinye zezona ziBaluleke kakhulu kwiRat Hat JBoss Enterprise Training & Certification Course zifana nokulandela:
I-RedHat JBoss Enterprise Application Development I
I-RedHat Data Data Virtualization Development
I-RedHat ye-JBoss Data Development Grid
I-Redhat JBoss Management Administration II
I-Redhat JBoss Ulawulo Lokusebenza I
I-Redhat JBoss A-MQ yoPhuhliso kunye nokuSebenza
I-Red Hat I-Sign Single On (SSO) Isebenza kwi-Red Hat i-Virtualization